အကောင်းဆုံးရှယ်ရထားကြီးစီးပြီး ငြိမ့်ညောင်းသာယာစွာခရီးထွက်ရအောင် !! - JAPO Japanese News
ဟူး 28 Oct 2020, 14:47 ညနေ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် တိုင်းပြည်ရဲ့ တိုးတက်မှုသွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မြေအကျယ်အ၀န်းကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံများမှာတော့ လေယာဉ်ပျံများကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်အကွာအဝေးအယူအဆပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
ဂျပန်သည် လေယာဉ်ပျံများလည်းရှိတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ကားလမ်းများနှင့် ရထားလမ်းများမှာမူ ထိုထက်မကတိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ကိုလာလည်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေဟာလည်း ရထားနဲ့ခရီးသွားကြတာများတယ်မလား။
အဲဒီရထားတွေထဲကမှ သေချာပေါက် ဂျပန်ရောက်ရင် စီးကြည့်စေချင်တာကတော့ Shinkansen ပါ။
Shinkansen သည် ၎င်း၏ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းများကို တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ခဲ့ပြီး ယခုဆိုရင် Hokkaido နှင့် Kyushu သို့ပါသွားနိုင်ပြီး ဂျပန်တစ်ဝန်းလုံးသို့သွားလာလို့ရနေပါပြီ။Shinkansen ရဲ့ အလွန်မြင့်မားသောမြန်နှုန်း၊ လုံခြုံမှုနှင့်တုန်ခါမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် စီးနင်းလိုက်ပါလာသောနိုင်ငံခြားသားများမှာ အတော်အံ့အားသင့်သွားစေတာကတော့ အတော်များများရှိပုံရပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် ဒီလိုအကောင်းဆုံးရထားပေါ်မှာမှ အကောင်းဆုံးထိုင်ခုံမှာထိုင်ချင်တာလဲလို့ တွေးမိကြတဲ့သူများရှိပါသလား?အဲဒါကတော့ ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးမယ့် Gran Class ပါ။
Tohoku / Hokkaido Shinkansen
Joetsu / Hokuriku Shinkansen
ဤနှစ်ခုက Gran Class ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။အတွင်းကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ရထားတစ်တွဲတည်းတွင် ထိုင်ခုံ ၁၈ နေရာသာရှိသည့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် တတန်းလျှင် ထိုင်ခုံ ၅ နေရာရှိရမည့်အစား ၃ နေရာသာရှိပါတယ်။
ဖိနပ်များနှင့်စောင်များ ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကိုလည်း အသုံးပြုရန်ထည့်ထားပေးပါတယ်။မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ တည်ခင်းပေးတဲ့အစားအစာကလည်း ရှယ်ပါပဲ။
ပေါ့ပါးတဲ့ အစားအစာဖြစ်ပေမယ့် ဤအစားအစာများကို သေသေချာချာချက်ပြုတ်ပြီးမှ တည်ခင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အချိုရည်များကိုလည်း လေယာဉ်ပျံပေါ်မှာကဲ့သို့ပင် သယ်ဆောင်လာကာ တည်ခင်းပေးပါတယ်။
မီးရထားလမ်းတစ်လျှောက် Nagano နှင့် Yamagata မှဝိုင်နှင့် Miyagi စီရင်စုမှရရှိသောဝိုင်တို့ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။
၎င်းသည် လေယာဉ်ပျံလိုမဟုတ်တဲ့အတွက် လေယာဉ်စီးရတာကို မနှစ်သက်သောသူများအတွက် အကြံပြုပါတယ်။စကားမစပ်၊ ရထားထွက်သည့်နေ့၌ တိုကျိုဘူတာရုံရှိ Lounge မှာ စီးနင်းဖို့စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။သူ့မှာ လေယာဉ်ပျံများ၏ Business Class နှင့်တူညီသောဝန်ဆောင်မှုပါဝင်ပါတယ်။
အဲဒီအပြင် အပြင်ပန်းရှုခင်းတွေကလည်း လေယာဉ်ပျံပေါ်ကရှုခင်းများနှင့်မတူပါဘူး။
ရထားက မြေပြင်ပေါ်တွင်သွားနေသောကြောင့် လေယာဉ်ပျံမှမြင်ရသောရှုခင်းနှင့်မတူဘဲ အရာများစွာကိုမျက်ဝန်းထဲမှာ မြင်နိုင်ပါတယ်။
လှပတဲ့ ဂျပန်ကျေးလက်ဒေသကို ပျော်မွေ့ရှုစားရန် သင်အဆင်ပြေသောထိုင်ခုံပေါ်တွင် ငြိမ့်‌ညောင်းလွန်းကာ Eye Mask တပ်ပြီး အိပ်ပျော်သွားရင်တော့ ရှုခင်းတွေကို မမြင်လိုက်ရတာမျိုး တော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တော့ထင်ပါတယ်။ဂျပန်ရောက်ရင်တော့ သေချာပေါက် ရထားစီးပြီး ခရီးသွားဖြစ်အောင်သွားပါ။
လေယာဉ်စီးတဲ့အခါကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ကရိကထတွေကို ဂျပန်လူမျိုးတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြလဲ ?
ပုရိသတို့ အသဲစွဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာစေဖို့ လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ချက် !!!
မုန်တိုင်းနံပါတ် (၁၄)ကြောင့် JR Central ကလည်းအချို့လိုင်းများပြေးဆွဲမှုဆိုင်းငံ့မည်ဟုပြောကြား
ရုပ်ရှင်တွေထဲက သိပ္ပံကမ္ဘာကို ဖန်တီးပေးမယ့် ANA
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ သိချင်စိတ်ကြောင့် ရယ်အားထက်၊ ငိုအားသာခဲ့ရသော ဒါရိုက်တာ !!